အတုပြုလုပ်ထားသော သံမဏိအဆို့ရှင်များနှင့် သံမဏိအဆို့ရှင်များကို ရွေးချယ်နည်း
Forged steel valve နှင့် cast steel valve သည် အဓိကအားဖြင့် steel forging နည်းပညာဖြစ်ပြီး၊ processing form မှာ မတူညီပါ။ Casting သည် အရည်သွန်းပုံသွင်းခြင်းဖြစ်ပြီး အတုလုပ်ခြင်းသည် ပလပ်စတစ်ပုံပျက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပြီး၊ ပုံသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းခွင်ကို ပုံသွင်းခြင်းသည် အဖွဲ့အစည်း၏အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံကို တိုးတက်စေခြင်း၊ ကောင်းမွန်သောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ၊ un...
2020 ခုနှစ်အတွက် ထိပ်တန်း China ball valve ထုတ်လုပ်သူ 10 ဦးစာရင်း
2020 ခုနှစ်အတွက် ထိပ်တန်းတရုတ်ဘောလုံးအဆို့ရှင်ထုတ်လုပ်သူ 10 ဦးစာရင်း 1.Suzhou Neway Valve Co., LTD. သည် နာမည်ကြီးအဆို့ရှင်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Jiangsu ပြည်နယ်ရှိ ထင်ရှားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အကြီးဆုံးနည်းပညာမြင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံရှိ စက်မှုအဆို့ရှင်များကို ထုတ်လုပ်သူနှင့် တင်ပို့ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ အထူး...
21-11-24 ရက်နေ့တွင် admin မှ
China Gate Valve ထုတ်ကုန်စျေးကွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ပြည်တွင်းပြည်ပအဆို့ရှင်နည်းပညာနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပဈေးကွက်ဝယ်လိုအားကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ စက်မှုအဆို့ရှင်များ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဦးတည်ချက်နှင့် အဆို့ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်း၏ မြင့်မားသောနည်းပညာအသစ်များကို မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း လေ့လာခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်...
Check valve သည် ကြားခံကိုယ်တိုင်၏ စီးဆင်းမှုကို အားကိုးပြီး အလိုအလျောက် အဖွင့်အပိတ် အဆို့ရှင်အချပ်ပြားကို စစ်ဆေးရန် အဆို့ရှင်၊ တစ်လမ်းသွား အဆို့ရှင်၊ တန်ပြန်အဆို့ရှင် နှင့် နောက်ပြန်ဖိအား အဆို့ရှင်ဟုလည်း ခေါ်သည်။ Check valve သည် အလိုအလျောက် အဆို့ရှင်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ ...
Fully Lined Polyurethane Knife Gate Valve Abrasive Resistant
ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား- အရွယ်အစားများ- NPS2မှ NPS 48 ဖိအားအပိုင်းအခြား- အတန်းအစား 150၊ PN16၊ PN10 Flange ချိတ်ဆက်မှု- Flange ပစ္စည်းများ- Casting- (GGG40၊ GGG50၊ A216 WCB၊ A351 CF3၊ CF8၊ CF3M4၊ A3F9 LCB၊ LCC၊ LC2) Monel၊ Inconel၊ Hastelloy၊UB6 Standard ဒီဇိုင်းနှင့် MSS SP-81 Face-to-fa...
21-10-05 ရက်နေ့တွင် admin မှ
Newsway Valve (NSW) ကုမ္ပဏီသည် အတုပြုလုပ်ထားသော သံမဏိအဆို့ရှင်များ၏ ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် တင်ပို့ခြင်းတွင် နှစ်ပေါင်း 20 ကျော် အတွေ့အကြုံရှိသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ထုတ်ပေးသည့်အဆို့ရှင်တိုင်းသည် 100% အရည်အသွေးပြည့်မီကြောင်း သေချာစေရန် ISO9001 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့်အညီ ထုတ်ကုန်များကို တင်းကြပ်စွာ ထိန်းချုပ်ပါသည်။ ငါတို့ကုမ္ပဏီက ငါတို့...
ISO5211 တပ်ဆင်ထားသော pad ပါသည့် ဘောလုံးအဆို့ရှင်များကို အဘယ်ကြောင့်ရွေးချယ်ရသနည်း။
admin မှ 21-09-18 ရက်နေ့တွင်
ISO 5211 တပ်ဆင်ခြင်း pad ပါရှိသော ဘောလုံးအဆို့ရှင်များသည် သာမန်ဘောလုံးအဆို့ရှင်ထုတ်ကုန်များ၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် သာမန်ဘောလုံးအဆို့ရှင်၏လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးပါဝင်ပြီး သာမန်ဘောလုံးအဆို့ရှင်ထက် ပိုမိုလှပသောပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပြီး ပိုမိုသိမ်မွေ့သည်။ ပလပ်ဖောင်းဘောလုံးအဆို့ရှင်များပါရှိသောလျှပ်စစ်သို့မဟုတ် pneumatic actuator များတပ်ဆင်ခြင်းသည် ve...
Stainless Steel Gate Valve API 600 Standard
Newsway Valve ကုမ္ပဏီသည် API 600 Standard တွင် stainless steel gate valves များကို ထုတ်လုပ်ထားပြီး valves material များသည် stainless steel၊ duplex stainless steel၊ super duplex stainless steel (CF8, CF8M, CF3, CF8M, 4A, 5A, 6A) များဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ gate valves များသည် ယိုစိမ့်မှုမရှိပါ။ API 600 Stainless Steel Gate Valve ဟူ၍ ပိုင်းခြားထားပါတ...
ဘာကြောင့် Forged steel globe valve ကို သင်ရွေးချယ်တာလဲ။
Forged steel globe valves များကို forged carbon steel globe valves နှင့် forged stainless steel globe valves များအဖြစ် ပိုင်းခြားထားပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် မြင့်မားသော နှင့် အလတ်စား ဖိအားများ (150lb-800lb, 1500LB, 2500LB) နှင့် မြင့်မားသော နှင့် low temperature အခါသမယ (-196℃ ~ 700 ℃)၊ အတုပြုလုပ်ထားသော သံမဏိအဆို့ရှင်များသည် မြင့်မားသောစတု...
NEWSWAY VALVE COMPANY သည် "အရည်အသွေးစံနှုန်း" Zhejiang ထုတ်လုပ်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုရရှိခဲ့သည်။
21-08-14 ရက်နေ့တွင် admin မှ
Newsway Valve ကုမ္ပဏီသည် ကိုယ်တိုင်ကြေငြာချက်၊ ထုတ်ကုန်စစ်ဆေးခြင်း၊ တင်းကျပ်သောသုံးသပ်ချက်နှင့် အခြားလင့်ခ်များကို 2020 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ 1 ရက်နေ့တွင် အောင်မြင်ခဲ့ပြီး Zhejiang Manufacturing International Certification Alliance မှထုတ်ပေးသည့် "Zhejiang Manufacturing Certification" လက်မှတ်ကို တရားဝင်ရရှိခဲ့ပါသည်။
Y strainer valve အမျိုးအစားလေးမျိုးနှင့် ပြီးပြည့်စုံသော တည်ဆောက်ပုံသွင်ပြင်လက္ခဏာများ
admin မှ 21-08-12 ရက်နေ့တွင်
Y strainer valve သည် conveying medium ၏ ပိုက်လိုင်းစနစ်တွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော strainer valve ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Y strainer valve ကို ဖိအားလျှော့ချသည့်အဆို့ရှင်၏ဝင်ပေါက်၊ ဖိအားသက်သာသည့်အဆို့ရှင်၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ရေပမာဏအဆို့ရှင် သို့မဟုတ် အခြားစက်ပစ္စည်းများတွင် တပ်ဆင်ထားသည်။ 1. air strainer valve သည် po...
ပိုက်လိုင်းများတွင် အဆို့ရှင်များ၏ လုပ်ဆောင်ချက် လေးခု
admin မှ 21-08-06 ရက်နေ့တွင်
Newsway Valve Company (NSW) အဆို့ရှင်များသည် ပိုက်လိုင်း၏ နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြပြီး၊ ၎င်းသည် ပိုက်လိုင်းအဆို့ရှင်များအတွက် အောက်ပါလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည် 1. ကြားခံကို ဖြတ်ပြီး လွှတ်ပေးပါ ဤသည်မှာ valve ၏ အခြေခံအကျဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့်၊ ဖြောင့်ဖောက်စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းပါသော အဆို့ရှင်ကို ရွေးချယ်ပြီး ၎င်း၏စီးဆင်းမှု...
အတုပြုလုပ်ထားသော စတီးလ်အဆို့ရှင်များနှင့် ကာဗာကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ...
ထိပ်တန်းတရုတ်ဘောလုံးအဆို့ရှင်ထုတ်လုပ်သူ 10 စာရင်း...